Ogaden News Agency (ONA) – Daawo: Gudomiyaha Hogaanka Warfaafinta JWXO oo ESAT TV Waraystay.
Daawo: Gudomiyaha Hogaanka Warfaafinta JWXO oo ESAT TV Waraystay.
Gudoomiyaha Hogaanka Warfaafinta Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia (JWXO) Mudane Xassan Macalim ayaa waraysi dheer oo dhinacyo badan taabanaya siiyay TV-ga Afka Axmaariga kubaxa ee ESAT TV.
Mudane Xassan ayaa siwaafi ah uga warbixiyay xaalada wadanka lagumaysto ee Ogadenia iyo qorshayaasha cusub ee gumaysigu uu ladamacsan yahay dadka shacabka ah ee Soomaalida Ogadenia.
Mudane Xassan Macalim ayaa sheegay in wadanka Ogadenia ay ku barakaceen dad kor u dhaafaya 1 milyan oo shacab ah kuwaas oo hantidii ay dhaaftay, sidoo kale Mudane Xassan ayaa sheegay in ay abaartu baabi’isay in kabadan 2 milyan oo xoolo ah.
Gudomiye Xasan oo hadalkiisa siiwata ayaa sheegay in gudaha wadanka Ogadenia ay kusugan yihiin 3.8 milyan oo caruur iyo dad waayeel ah isugu jira oo ay macaluuli hayso, kuwaas oo sida Hogaanku uusheegay aan haysanin wax daryeel ah noocuu doonaba ha ahaatee.
Dhinaca kale Gudomiye Xasan oo wax laga waydiiyay dagaalada kasocda xuduuda Ogadenia iyo Oromia ayaa sheegay in ugu horaynba ay baaq u dirayaan dadka dariska iyo walaalaha ah ee hubka laysugu dhiibay, wuxuuna hogaanku sheegay in dagaalkan ay kooxda TPLF dabada ka riixayso iyagoo doonaya in ay fursad uhelaan siihaynta talada wadanka.
Sidoo kale Mudane Xassan Hogaanka Warfaafinta JWXO ayaa shacabka Soomaalida Ogadenia iyo shacabka Oromia ka codsaday in ay kadigtoonaadaan dhagarta taliska wayaanaha iyo kuwa u adeega ay umaleegayaan.
Dhinaca kale Gudomiyaha ayaa sheegay in gudaha wadanka Ogadenia laga hor istaagay dhamaan hay’adaha bini’aadam nimo iyo dadka ushaqeeya saxaafada, wuxuuna hogaanku arintaas ku macneeyay Itoobiya oo qarinaysa dhibaatada wadanka Ogadenia kajirta.
Intaas kadib Hogaanka oo wax laga waydiiyay xaalada guud ee Itoobiya ayaa sheegay in maanta Itoobiya ay tahay geed wayn oo hoosta kaxordan, wuxuuna Hogaanku tilmaamay in magac wayn uun uu kasoo hadhay Itoobiya.
Gabagabadii Hogaanka Warfaafinta JWXO Mudane Xassan Macalin ayaa sheegay in loobaahan yahay in dhamaan shucuubta lagumaysto ay u istaagaan sidii ay u hambooriyi lahaayeen taliska siiliicaya ee wayaanaha.